Sida Loo Sameeyo Website Aroos leh WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Sameeyo Website Aroos leh WordPress
Maalmahan, waxaad mooddaa in aroos walba uu leeyahay goob u gaar ah. Waa macno - haddii aad leedahay degel, martidu waxay ka heli karaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin hal meel. Si kastaba ha ahaatee, aroosyada ayaa ah kuwo walaac ku filan oo aan ka welwelin samaynta goobta.
Taasi waa meesha WordPress yimaado. Waxaad si fudud u isticmaali kartaa madal si ay u abuuraan website a aroos qurux badan. Waxay xitaa awood kuu siineysaa inaad ku darto qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah sida diiwaanka rajada, buugaagta martida, iyo in ka badan. Ikhtiyaarada habaynta waa kuwo aan dhammaad lahayn!
Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa sababta aad WordPress ugu isticmaasho goobta arooska, oo ku bari doona sida loo sameeyo mid ka mid ah afartii tillaabo (looma baahna qorshe guuriye). Waxaan haynaa xog badan oo aan dabooli karno, markaa aan qodno!
Maxay tahay inaad WordPress u isticmaasho Mareegta Arooska
WordPress maaha goobta ugu horeysa ee maskaxda ku soo dhacda marka dadku ka fikiraan mareegta arooska. Si kastaba ha ahaatee, the Nidaamka Maareynta Maaddada (CMS) waxay ku fiican tahay wax ka badan blogging. Si aan fikrad kuu siiyo, hadda awoodaha WordPress ka badan boqolkiiba 30 ee shabakada, si aad u ogaato in ay samaynayso wax sax ah.
Mareegaha arooska, waxaad u baahan tahay madal ay fududahay in lagu habeeyo faahfaahinta maalintaada gaarka ah. Sidoo kale dhib ma leh in aad hesho astaamo kaa qaadi doona culaab garbahaaga marka ay timaado qorshaynta. Taas waxaa ka mid ah la socodka RSVP-yada, hoyga martida, diiwaannada hadiyadaha, iyo in ka badan. Waxa kale oo aad u baahan doontaa qalab sameeya Naqshad wax ku ool ah fudud.
WordPress si fudud ayay u maarayn kartaa waxyaabahan daruuriga ah. Dhankaas, madal lafteedu waa bilaash. Markaa kharashyadaada hore ee samaynta mareegaha waxay noqon karaan kuwo raqiis ah, gaar ahaan haddii aad adigu samayso.
Relacionado: Intee in le'eg ayay dhab ahaantii ku kacaysaa in la sameeyo degel WordPress ah?
Sida Loo Sameeyo Mareeg Aroos Iyadoo WordPress (4 Tallaabo)
Dhismaha goobta arooska ee WordPress waxaa laga yaabaa inaysan u baahnayn tillaabooyin badan, laakiin qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku qaataan wakhti. Haddii arooskaagu uu ku jiro horraantii, hadda waxay noqon doontaa waqti aad u fiican si aad u bilowdo ka shaqeynta shabakadeeda!
Talaabada 1: Dooro Martigeliyaha Mareegta oo ku rakib WordPress
Talaabada ugu horeysa ee abuurista degel kasta waa in la diiwaan geliyo magac domain oo aad doorato martigeliyaha shabakadda.
Diiwaangelinta magac domain aad bay u fudud tahay, markaa wax badan kuma qaadan doonno wakhtigaaga. Sidoo kale, doorashada Magaca la isticmaalayo waa inuusan qaadan waqti dheer. Haddii magacaagu yahay Jack oo aad guursanayso Susan, sii jackandsusanaregettinghitched.com go a.
Doorashada martigeliyaha shabakadda, dhanka kale, waxay heli kartaa khiyaano. Maadaama ay u badan tahay inaad raadinayso inaad ku dhisto degel miisaaniyad, waxaad u baahan doontaa inaad ku adkaysato qorshayaasha la wadaago. Bixiye kasta oo aad doorato waa inuu bixiyaa waxqabad wanaagsan iyo nidaam taageero oo heer sare ah. Waa inay sidoo kale si wacan ula ciyaarto WordPress.
Anigoo taas maskaxda ku hayna, waxaan ku dhex tuuri doonaa koofiyadayada giraanta anagoo wadata qorshooyinka martigelinta ee WordPress la wadaago. Heerka aasaasiga ah wuxuu ka bilaabmaa kaliya $ 2.59 bishiiba, oo waa ka awood badan ku filan website arooska.
Markaad iska diiwaan geliso qorshaha martigelinta, waxaad rabi doontaa rakib WordPress. Haddii aad doorato mid ka mid ah qorshayaashayada, WordPress waa inuu kor u kacaa oo uu sii wadaa mar hore, si aad isla markiiba u bilowdo.
Jacaylka Goobta Koowaad
Qorshaynta arooska hadda way fududaatay - ku dhis degelkaaga arooska WordPress DreamHost.
Talaabada 2: Dooro Mawduuca Dhacdada Arooska ee Wanaagsan ee WordPress
Aasaaska goob kasta oo WordPress ah waa mawduuca ugu fiican. Mawduucyada WordPress waa asal ahaan template ah qaabeynta website-kaaga, oo dhamaystiran wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u naqshadayso goob qurux badan - ka fikir fonts, qaab-dhismeedka menu, iwm. Ilaa hadda sida website-yada arooska tagaan, waxaad u baahan tahay a mawduuca WordPress ka jawaabaya taas oo sahlaysa in sawiradu ay iftiimaan. Ka dib oo dhan, inta badan mareegaha arooska waxaa ka buuxa sawirada arooska iyo aroosadda.
Intaa waxaa dheer, mawduuc kasta oo aad doorato waa inuu buuxiyaa saddexdan qodob:
Waxay helaysaa cusbooneysiin joogto ah.
Waxay leedahay qiimeyn wanaagsan.
Horumariyayaashu waxay ka jawaabaan weydiimaha taageerada.
Waxa kale oo aad rabi doontaa mawduuc kaas fududahay in la habeeyo. Waxaa jira kumanaan mawduucyo ah oo laga dooran karo, oo ay ku jiraan mawduucyo bilaash ah iyo kuwo qaali ah, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad raacdo wax la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo.
Qaado Jack & Rose, tusaale ahaan.
Mawduucan qaaliga ah ee WordPress ($50) waxa uu awood kuu siinayaa in aad sawiro iyo fiidyowyo hore iyo badhba dhigto, kaas oo ku fiican. Waxa kale oo ay si fiican u isticmaashaa midabada pastel iyo naqshad qurux badan - kuwaas oo ku habboon bogga arooska - oo ay ku jiraan saacad tirinta (waxaan kuu ogolaan doonaa inaad qiyaasto taariikhda).
Doorasho kale oo weyn ayaa noqon doonta Waayaha theme premium ($59). Midkani maaha kaliya aroosyada - sidoo kale si fiican ayuu u shaqeeyaa noocyada kale ee dhacdooyinka.
Qaababka arooska mawduucan waxaa ku jira waa qurux. Dhammaantood waxay ka kooban yihiin naqshad yar oo ku habboon haddii aad rabto inaad isku dhejiso shabakad aroos oo fudud, oo aan la sheegin.
Maskaxda ku hay - kuwani maaha doorashooyinka kaliya ee jira. Raadinta degdega ah ee Google-ka ee 'wordpress themes wedding' ayaa daaha ka qaadi doonta boqollaal ikhtiyaar, oo ay ku jiraan mawduucyada arooska bilaashka ah ku yaal hagaha WordPress. Qaado wakhtigaaga si aad u hesho midka ugu fiican, ka dibna rakibi goobtaada.
Relacionado: Sida macmiilkan DreamHost u koray ganacsi sawir leh oo leh shabakad firfircoon
Talaabada 3: Kudar Sifooyin Horukacsan Mareegahaaga Adigoo Adeegsanaya Plugins
Haddii aad rabto in aad u qaado website arooska aad heerka ku xiga, aad rabto in aad isticmaal plugins WordPress. Qaybtan, waxaan ku sahamin doonaa sifooyin kala duwan oo laga yaabo inaad jeceshahay inaad ku darto, waxaanan ku bari doonaa plugins aad isticmaali karto si aad u hirgeliso.
Foomka xiriirka dhijitaalka ah wuxuu u sahlayaa booqdayaasha mareegahaaga inay soo diraan rabitaankooda ugu wanaagsan, ku weydiiyaan su'aalo adoon qarxin taleefankaaga, iyo in ka badan. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso Buuga Martida ee Gwolle plugin.
Plugin-kan, waxaad ku dari kartaa qayb buug martida ah mid ka mid ah boggagaaga. Soo-booqdayaashu uma baahna inay is-diiwaangeliyaan si ay u isticmaalaan, oo waxaad fursad u helaysaa inaad faallooyinka dib u eegto ka hor intaysan si guud u soo bixin.
Qaybta ugu fiican ee aroos kasta - marka laga reebo inaad guursato qofka aad jeceshahay, dabcan - waa inaad hesho hadiyado badan. Maalmahan, dukaamada internetka ayaa fududeeyay in la sameeyo diiwaanka aroosyada. Iyada oo leh bogga arooska ee adiga kuu gaar ah, waxaad u hibeyn kartaa bog dhan oo kaliya diiwaanka hadiyadaha, si qof kastaa u ogaado waxa loo iibsanayo lamaanaha faraxsan.
Ujeedadan gaarka ah, waxaan ku talinaynaa WPgiftRegistry plugin.
Adigoo isticmaalaya WPgiftRegistry, waxaad dejin kartaa liisaska dhammaan shayada aad rabto oo ay ku jiraan sawirro, URL-yada, sharraxaadaha, iyo qiimayaasha. Waxa ugu wanagsan, waxay u shaqaysaa ku dhawaad ​​shay kasta oo aad rabto, ilaa inta aad ka heli karto URL si aad u iibsato.
Marka lagu daro khariidad ku taal mareegta arooska waa tallaabo xariif ah oo lagu hubinayo in gabdhaha aroosyada ah iyo kuwa is guursanaya aan laga tegin. Kaliya ku darista goobta qoraalka cad ayaa sidoo kale shaqaynaysa, laakiin maxaad u dejinaysaa marka aad sidoo kale soo bandhigi karto khariidad qurxoon?
Waxaa jira adeegyo badan oo khariidado khadka ah oo aad isticmaali karto si aad u dhexgeliso maabyada mareegahaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu nahay taageereyaal weyn oo Khariidadaha Google ah, taas oo macnaheedu yahay waxaan diiradda saari doonaa plugins ee la shaqeeya.
Marka hore, waxaanu ku talinaynaa Khariidadaha WP Google plugin, kaas oo awood kuu siinaya inaad 'abuurto' maabyo badan oo aad ku darto meel kasta oo ka mid ah goobtaada adigoo ku dhejinaya koodka gaaban.
Haddii aad ka badan tahay qof widgets ah, waxaa laga yaabaa inaad doorbidayso isticmaalka Khariidadaha Google-ka Widget. Plugin-gani waxa uu awood kuu siinayaa in aad ku darto khariidad dhinacaaga ama cagahaaga.
Iyada oo aan loo eegin plugin aad isticmaashid, waxaad ku dambayn doontaa khariidadda Google-ka ee si fiican u eeg boggaaga.
Mid ka mid ah astaanta shabakadaha arooska waa saacad tirinta oo ku saxaysa ilbiriqsiyo ka fog ilaa aad ka gaadhayso meesha allabariga. Way fududahay in la hirgeliyo oo waxay ku kordhisaa xoogaa madadaalo ah mareegahaaga.
Waxaa jira plugins badan oo aad isticmaali karto si aad ugu darto saacadaha tirinta WordPress. Mid ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay waa Countdown Timer Ultimate, kaas oo awood kuu siinaya inaad ku darto waqti-gooyeyaal leh naqshado madadaalo leh.
Haddii aad rabto wax yar oo heer sare ah, T(-) Tirinta waxay leedahay qaabab badan oo toned-hoos u ah, waana sidaas si fudud in la isticmaalo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad rabtaa inaad hubiso in saacada tirintaada la dhigay meel u dhow meesha ugu sarreysa boggaaga. Habkaas waa sahlan tahay in la arko, qof walbana wuu la socon karaa taariikhda.
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, waxaanu haynaa albam sawireed. Websaydh kasta oo aroos ah wuxuu u baahan yahay meel aad ku muujin karto dhammaan sawiradaada qaab gallery oo ku habboon.
WordPress wuxuu taageeraa sawirada sawirada ee ka baxsan sanduuqa. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad xoogaa madadaalo leh kaaga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho plugin sida Sawirka Gallery ee 10web.
Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad bixiso Sawirka Sawirka Robo fursad. Plugin Tani waxay sidoo kale taageertaa qaabab badan gallery iyo awood aad ku darto fursadaha wadaaga warbaahinta bulshada.
Ilaa iyo inta plugins-yada WordPress ay tagaan, goobaha sawiradu waa mid ka mid ah maadooyinka ugu caansan. Taasi waxay la macno tahay inaad haysatid daraasiin ikhtiyaar ah oo aad ka dooran karto, markaa xor u noqo inaad hareeraha ka eegto qaar kale haddii aad rabto!
Tallaabada 4: Habbee boggaga Mareegta Arooska
Hadda waxaa timid qaybta adag, taas oo isku geynaysa dhammaan boggaga aad rabto in boggaaga arooska lagu daro. Hadda waa inaad haysataa dhammaan agabka aad u baahan tahay si taasi u dhacdo.
Si aad u bilowdo, waxaanu dul mari doonaa qaar ka mid ah boggaga caanka ah ee shabakadaha arooska oo ay ku jiraan, ka hadal waxyaalahooda, oo ku tusi doona tusaalooyin. Habkaas, waxaad ku soo koobi kartaa waxaad rabto oo aad ka shaqeyso.
Ma jiro website aroos ah oo dhamaystiran iyada oo aan wax yar oo gadaal ka ah lamaanaha. Sheekadeenii boggu waa meesha ugu fiican ee lagu wadaago sidii aad isku barateen, mudada aad wada joogtay, iyo faahfaahin kale oo ku saabsan xidhiidhkaaga.
Hadda ka hor, waxaan uga hadalnay sida loogu daro maabka boggaaga arooska. Goob ama Goobta bogga waa meesha ugu fiican ee lagu daro khariidadaas, iyo sidoo kale ciwaanka buuxa ee goobta, iyo wakhtiga martida ay tahay inay yimaadaan.
Dad badan ayaa doorta inay ku guursadaan meelo ka baxsan jidka. Haddii aad ka mid tahay iyaga, martidaadu waxay u baahan doonaan meel ay joogaan. Caadiyan, waa shaqadaada inaad u tilmaamto hoteelada ugu habboon.
Bogga Hoyga waa meesha aad geliso dhammaan macluumaadkaas, oo ay ku jiraan qiime kasta oo gaar ah oo hudheeladu diyaar u yihiin inay siiyaan xubnaha xafladda arooska.
Waxaan sidoo kale ku tusnay sida loogu daro buugga martida boggaaga arooska. Fikrad ahaan, buugga martidadu waa inuu lahaadaa bog u gaar ah, si booqdayaashu ay uga dhex baadho faallooyinka xilliga firaaqada.
Wax xiiso leh sida liiskaaga rabitaanku wuxuu u qalmaa geeskiisa yar ee boggaaga. Diiwaanka Hadiyada bogga waa in ay ku jiraan dhammaan alaabta aad rabto iyo meesha aad ka iibsanayso. Waxa kale oo aad awood u siin kartaa martida inay ka iibsadaan alaab online ka ah goobtaada, addoo isticmaalaya plugin aan hore kuu tusin.
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee aroos kasta waa liiska martida. Bogga RSVP, dadku waxay ku buuxin karaan foom si ay kuu ogeysiiyaan inay ka qayb galayaan iyo haddii ay marti u soo qaadayaan.
Goobaha sawiradu aad bay u badan yihiin, taadu uma baahna boggeeda - waxay aadi kartaa meel kasta oo aad rabto!
Qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu daro goobta sawirada waxaa ka mid ah bogga gurigaaga, iyo Sheekadayada .
Haddii aad rabto in booqdayaasha boggaga ay ku weheliyaan safarkaaga oo dhan, waxaad ku siin kartaa cusbooneysiin ku saabsan blog. Nasiib wanaag adiga, WordPress waa goobta ugu fiican ee wax lagu qoro ee agagaarka ah. Wax dhib ah kala kulmi doontid qorista iyo habaynta qoraalada addoo isticmaalaya tafatiraheeda.
Diyaar ma u tahay inaad abuurto boggaaga arooska ee WordPress?
Waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Ku xidh guntinka
Haddii aad rabto in aad abuurto website arooska miisaaniyad, WordPress waa doorasho weyn. Way fududahay in la soo qaado, oo lagu daro mawduuca saxda ah iyo plugins, waxay ka dhigaysaa dhismaha (iyo habaynta!) Websaydh qurux badan oo aroos ah oo aad u fudud.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo website isticmaalaya WordPress maalinta arooska? Nala soco Twitter oo aan wada hadalno!
6 Apps Apple Watch oo loogu talagalay lix xirmo oo cajiib ah